गगन थापाकी छोरीलाई स्कुलमा मास्टरले सोधे, तिम्रो बाबालाई के मन पर्छ ? छोरीले जवाफ सुनेर गगन र श्रीमती अञ्जना भावुक भए,हेर्नु होस छोरिको जवाफ…!!! – नेपाली सूर्य
गगन थापाकी छोरीलाई स्कुलमा मास्टरले सोधे, तिम्रो बाबालाई के मन पर्छ ? छोरीले जवाफ सुनेर गगन र श्रीमती अञ्जना भावुक भए,हेर्नु होस छोरिको जवाफ…!!!
December 21, 2017 Nepali SuryaLeaveaComment on गगन थापाकी छोरीलाई स्कुलमा मास्टरले सोधे, तिम्रो बाबालाई के मन पर्छ ? छोरीले जवाफ सुनेर गगन र श्रीमती अञ्जना भावुक भए,हेर्नु होस छोरिको जवाफ…!!!
धेरैलाई थाहा छैन, गगन घरमा कथाकार पनि हुन् । जेठी छोरी उनको कथा नसुनी निदाउँदिनन् । ‘दिनभर समय दिन नसकेपनि म राति घर चाँडो आउने प्रयत्न गर्छु,’ गगनले भने, ‘जेठी छोरी मेरो कथा सुन्न रुचाउँछे । राजधानीमै भएका बेला म उसलाई कथा सुनाउने गरी घर आइपुग्ने कोसिस गर्छु । कतिपल्ट बाहिर हुँदा गाडी चलाउँदै फोनमै कथा भनेर पनि सुनाएको छु । म त घरको कथाकार नै भइसके । के के सिर्जना गर्छु–गर्छु ।’ घरका छोरीलाई दूध खुवाउने, बाथरुम लैजाने जस्ता काममा पनि गगन सक्रिय हुने गरेको बताए । ‘छोरीहरूको स्कुलको कुनै पनि इभेन्ट म छुटाउँदिन,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई अस्पताल लानुपर्नेदेखि उनीहरूका हरेक गतिविधि र शिक्षादिक्षाप्रति अपडेटेड छु । त्यसैले छोरीलाई बेवास्ता गरेको, समय नदिएको भन्ने फिटक्कै होइन ।’
छोरीहरू स–सानो भएकाले यो उमेरमा उनीहरूसँग धेरै समय बिताउनेपर्ने आवश्यकता गगनले राम्रोसँग अनुभूत गरेका छन् । त्यसैले राजधानी बाहिर पोखरा या विराटनगर पुगेका छन् भनेपनि उनी भरसक अन्तिम फ्लाइटमा भएपनि घर फर्कने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् । ‘घर पुग्नासाथ छोरीहरूको मुहारमा छाउने खुशीलाई म महसुस गर्न सक्छु,’ उनले भने, ‘तीन वर्षकी सानी छोरीले कहिले तान्छे, कहिले चिथोर्छे । कहिले त रुन्छे पनि । म जति उपलब्ध हुनुपर्ने त्यति हुन नसकेको महसुस म उसको एक्सप्रेसनबाट फिल गर्न सक्छु । जेठी छोरीले सधैं ‘कतिखेर आउनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नले पनि मलाई फिल गराइरहेको हुन्छ । ’
राजनितीमा लागेका अधिकांश नेताको जीवन अस्तव्यस्त देखिन्छ । समय व्यवस्थापन गर्न नसकेको कि व्यस्त नै हो ? भन्ने प्रश्नमा गगनले भने, ‘हामीले समय मिलाउन नजानेकै हो । स्याङ्जाका सांसद शंकर पाण्डे भन्नुहुन्थ्यो ‘हामी व्यस्त होइन, अस्तव्यस्त ।’ अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले कुकुर लिएर घर बाहिर हिँडेको तस्बिर नेपालकै पत्रिकामा छापिएको हो । उनीहरूसँग समय हुने हामीसँग नहुने भन्ने हुन्छ ? हामी अस्तव्यस्त नै हो । हामीले विदाको दिन अर्थात् शनिवार यो चाँही परिवारलाई दिने समय हो भनेर भन्न नसकेकै हो । तर परिवार राम्रोसँग व्यवस्थापन भयो भने मात्र देशको व्यवस्थापन हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।’
अञ्जनालाई आफ्ना बुवा आमाले उ बेला दिएको समयको अहिले सम्झना आउँछ । ‘मलाई अझै पनि मेरो पापा–ममीले मिलेर होस्टेल पुराइदिएको, घुम्न लगेको दिनहरू याद छ,’ अञ्जनाले भनिन्, ‘आमाबुबाले सँगै दिएको खुशी छोराछोरीले याद गर्छन् । त्यसैले म गगनलाई यो बेलामा स्मृतीहरू बनाउनुपर्छ भन्छु ।’
माता सीतालाई अपहरण गर्दा राखेर लागेको पुष्पक विमान कसले बनाएका थिए?